မြန်မာနိုင်ငံကို လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးအကူအညီ လို့ပြောပြီး ၊ စစ်တွေမြို့၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နှင့် မောင်တောမြို့တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးကို လျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ရှားနေသော(AZG) | ngalone
← ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဟု ကုလနှင့် ပူးတွဲ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ထပ်မံ ပြောဆို
မြန်မာနိုင်ငံကို လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးအကူအညီ လို့ပြောပြီး ၊ စစ်တွေမြို့၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နှင့် မောင်တောမြို့တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးကို လျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ရှားနေသော(AZG)
ကျွန်တော် ကတော့ နိုင်ငံတကာ လူမှု အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ အစည်း တွေအကြာင်းကို ရခိုင်ဒေသ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလေ့လာထားတဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ လူ့အခွင့်အရးကိုဗန်းပြ၊ လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတန်းကိုလက်ိကိုင်ထားပြီး ဘင်္ဂလီ တွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့နာမည်ပြောင်း၊ နောက်ဆုံး ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံ တည်ထောင် ဖို့ အဖက်ဖက်က အားပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အခုပြောချင်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမယ်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူမှု အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နည်စည်းမထားဆရာဝန်များအဖွဲ့ (ဟော်လန်) ခေါ် AZG ခေါ် MSF-Holland ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Artsen zonder Grenzen-AZG လို့ခေါ်တဲ့ နယ်စည်းမထား ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ အစည်း ဟောလန်နိုင်ငံ (MSF-Holland) MSF-Holland ဟာရန်ကုန်မြို့ ဗောဓိရိပ်သာ လမ်း ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာ Country Office အဖြစ်ရုံးချုပ်ရှိပြီး Mr. Peter Paul ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ (Head of Mission)အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့မှာ ကိစ္စ အဝဝ ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သူ ၁၂ ဦးရှိပြီး နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ Head of Mission က သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့ ၁၂ ဦးကတော့
1. Peter Paul (Head of Mission)_မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲ
2. Vickie (Deputy Head of Mission)_မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒုတိယ အကြီးအကဲ
3. Sharon (Finance Coordinator)_ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး_Peter Paul ၏ဇနီး
4. Gerrie (Human Resource Coordinator)_ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး
5. Maria Guevara (Medical Coordinator)_ဆေးပညာညှိနှိုင်းရေးမှူး_မြန်မာနိုင်ငံAZGဆရာဝန်များ၏ အကြီးအကဲ
6. ဒေါက် ခင်ငြိမ်းချမ်း (Deputy Medical Coordinator)_လက်ထောက်ဆေးပညာညှိနှိုင်းရေးမှူး _ Maria Guevara ၏လက်ထောက်
7. Habtamu (Logistic Coordinator)_ ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး
8. Tom (Yangon Project Coordinator) ရန်ကုန်တိုင်း စီမံချက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး
9. Pawan (Northern Rakhine State Project Coordinator)_ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော ဒေသ စီမံချက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး
10. Tina (Eastern Rakhin State Project Coordinator)_ရခိုင်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း စစ်တွေဒေသ ဆိုင်ရာ စီမံချက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး
11. Iqbal Huda (Tidal) (Kachin State Project Coordinator) ကချင်ပြည်နယ်စီမံချက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး
12. Nikita (Shan State Project Coordinator) ရှမ်းပြည်နယ်စီမံချက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး`
အဲဒီအထဲမှာ တစ်ခု ထူးခြားတာကတော့ မြန်မာ ဆိုလို့ ဒေါက်တာ ခင်ငြိမ်းချမ်း တစ်ယောက် သာလျှင်ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံ သား ဝန်ထမ်းတွေဟာ အရေးပါတဲ့ အရာမှာ ရှိမနေဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒီအထဲမှာပြောချင်တာက အဲဒီ ညှိနှိုင်းရေးမှူးလို့ပြောတဲ့ သူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို တော့ Head of Mission (Peter Paul) နဲ့ Deputy Head of Mission (Vickie) တို့က ထပ်မံအုပ်ချုပ် ပါတယ်။
အဲဒီ အပေါ်က အုပ်ချုပ်တဲ့ လူနှစ်ယောက်ကိုတော့ ပြောစရာရှိပါတယ်။
Head of Mission (Peter Paul) ဟာ ဟော်လန်သားဖြစ်ပြီ၊ သူက ရခိုင်ဒေသက စီမံချက် နှစ်ခုက လွဲပြီး ကျန်တာတွေကို ကိုင်တွယ်ပါတယ်။
Deputy Head of Mission (Vickie) က တော့ နိုင်ငံရေးအတွက် အဖွဲ့ချုပ် ဟော်လန်ကနေ ခန့်အပ်ထားတာဖြစ် ပြီး သူမ ဟာ ဗြိတိန်လူမျိုး ဟော်လန်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ သူမရဲ့ နောက်ခံ ပညာရေးက နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ သူမက တော့ ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ စီမံချက် နှစ် ခု (စစ်တွေ(သို့မဟုတ်) ရခိုင်အရှေ့ပိုင်းစီမံချက် နဲ့ မောင်တောဘူးသီးတောင် (သို့မဟုတ်) ရခိုင်မြောက်ပိုင်း စီမံချက်) တို့ကို တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရိုဟင်ဂျာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူမကတော့ Jena ကိုခေါ်ပါတယ်။ သူမက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုံးထိုင်ပြီး ဒီ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ကမ္ဘာကိုပြောပြဖို့ အဓိက ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အရင်က မောင်တောဘူးသီးတောင် (ရခိုင်မြောက်ပိုင်း) စီမံချက်ရဲ့ စီမံချက် ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ ဟာ အလျင်းသင့်ရင် သင့်သလို ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို အလည်လာလေ့ရှိပြီး ၊ ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက် ယူမှု ကိုအခြေခံ ပုံဖျက်ကာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလကလည်း တစ်ခါ လာခဲ့ ပါသေးတယ်။
MSF-Holland (AZG)အဖွဲ့ဟာ စစ်တွေနဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်း ကစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး၊ လောလောဆယ်မှာ သူက အောက် ပါ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ် (Health Activities) များကို လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
1. ပဏာမ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (Primary Health Care)
2. မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (Reproductive Health)
3. ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ရောဂါဖြစ်နေသူများအားဆေးပေးခြင်း (HIV/AIDS Program and Antiretroviral Therapy Program)
4. လိင်မှတဆင့် ကူစက်တတ်သောရောဂါများ ကို ကာကွယ်ကုသခြင်း (Sexually Transmitted Disease Program)
5. တီဘီရောဂါကိုကာကွယ်ကုခြင်းလုပ်ငန်း(TB Program)
6. ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ကုသခြင်း လုပ်ငန်း (Malaria Program)
MSF-Holland ဟာရွာတွေမှာကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကို လေ့ကျင့် မွေးမြူထားပြီး အဓိက ကျတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာ အချက်အလက်တွေနဲ့ အခြားအချက်အလက်များကို သူတို့ ထံကနေတဆင့် ရယူလေ့ ရှိပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အထူးသဖြင့် ဆရာဝန်များနဲ့ ခန့်အပ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ကြီးကြပ်အဆင့်ဝန်ထမ်းတွေဟာ အပါတ်စဉ် နေ့တစ်ရက်မှာတော့ ညနေတိုင်း အစည်းအဝေး တွေလုပ်ရပြီး ၊ ဒီလို လုပ်တဲ့ အထဲမှာ အဓိက အားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရကြောင်း ကိစ္စတွေကို များများသတင်းရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အချက်အလက်တွေကို သိပြီးရင် စာနဲ့ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ် ပြီး စီမံချက်တွေမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသားကြီးကြပ်ရေမှူးတွေဆီကို တင်ပြအစီအရင်ခံရပါ တယ်။ ပြီးရင် တော့ ဒါတွေကို စုစည်း မှတ်တမ်းတင် ကွန်ပြူတာ မှတ်သား ပြီး တော့ မှ ရန်ကုန်ကို အပါတ်စဉ် တင်ပြ အစီရင်ခံရပါတယ်။ မူရင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတော့ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အရေး ကြီးတဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို တော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ကြီးကြပ်အဆင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေသာ တက်ခွင့်ရလေ့ ရှိပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြန် ဘင်္ဂလီ တွေဟာနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အဓိ က လူယုံ တော် တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ ရတာက တော့ သူတို့ ဟာ ဆေးရုံမှာ တင်ထား တဲ့ လူနာတွေကို ဆေးရုံက ဆင်းရင် Exit Interview ဆိုပြီးလုပ်ရပြီး ၊ ဘင်္ဂလီလူမျိုးလူနာတွေကို ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက ဘယ်လို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ပြီး ဆက်ဆံ ပြုမူတယ် ဆိုတာကို မေးမြန်းပြီး မှတ်တမ်းတင်လေ့ ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ AZG ဟာ မျိုးဆက်ပွားပြန့်ပွားရေးမှာ ၊ ဘင်္ဂလီတွေကို သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုသုံးရခိုင်း မယ့်အစား ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုဦးစားပေးပြီး ကလေးလိုချင်ရင် လိုသလောက် ယူဖို့နဲ့ ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။